Vaovao - valves indostrialy, Robot fa tsy hiasa amin'ny tanana
Any Chine, misy ny fiakaran'ny vidin'ny asa sy ny zaridainan'olombelona, ​​dia nanomboka be mpampiasa amin'ny sehatra maro samihafa ny robot, ary ny mpiasa manolo ny tsipika fanamboarana valizy amin'ny robot dia ekena ihany koa any amin'ireo ozinina valizy fanta-daza.
Orinasa malaza misy valizy any Danemark no voakasiky ny Covid-19, ary ny mpiasa dia tsy nahavita ny asa nampanaovina azy ireo tamin'ny fotoana niasana voafetra. Izany dia nanome ny mpanjifa ny hevitra amin'ny fampiasana robot hanoloana ny fiasan'ny tanana, ary ny fampiharana an'io tsipika famokarana io dia matotra ao Shina ary eken'ny mpanjifa.
Izahay dia namolavola ny vahaolana ho an'ny vatan'ny valizy vavahady.
Ireo milina telo dia:
Masinina mihodina miisa telo an'ny CNC, mba hahatsapany ny fihodinan'ny tavoahangy telo an'ny valizy vavahady amin'ny fotoana iray.
Milina marindrano atsivalana, ary atsofony ny lafiny telo amin'ny lafiny iray.
Masinina roa amin'ny fametahana masinina CNC, mba hahatsapana ny fanodinana miaraka ny zoro 5 degre ao anatin'ny vatan'ny valva.
Manolo ny famokarana tanana ny robot mba hitsitsiana ny vidin'ny asa. Mandritra izany fotoana izany, ny robot dia afaka mahavita fandidiana 24 ora, tsy mila robot tokana hikarakarana masinina telo. Ho fanampin'izany, ny maodely famokarana tsipika fivoriambe mandeha ho azy dia afaka mamonjy toerana bebe kokoa, manamboatra ny fandrafetana ny orinasa ary mamonjy ny vidin'ny harena an-tany.